တစ်ချိန်က ထားဝယ်မြို့နေ စပါးသူဌေးမကြီး ဒေါ်ပျင်သူ ပိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်သည်။ ဝဗျောရွာဘက်မှာ လယ်ဧကများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး အရင်က အိမ်၏အနောက်ဘက်ရှိ စပါးကျီကြီးကြောင့်လည်း လူသိများခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ 1825 နောက်ပိုင်း ပီနန်ဘက်ကနေ ဝင်လာခဲ့သည့် တရုတ် လက်သမားဆရာတို့၏ လက်ရာများထဲက တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။ တံစက်မြိတ်များကိုပင် သစ်သားဖောက်ပန်းအလှဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ဝရံတာကို စကော့တလန်နိုင်ငံ ကာဝီကျေးရွာက ထုတ်လုပ်သည့် သံပန်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ ကိုလိုနီခေတ် လက်ရာဟန် တရုတ်၊ပေါ်တူဂီ ဗိသုကာ လက်ရာဟန်မျိုး ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ထားဝယ်မြို့၏မြောက်ဘက်မြို့ရိုးကို ဖြိုဖျက်တည်ဆောက်ထားသော ကိုလိုနီခေတ် ဗာနေလမ်းမကြီးပေါ် ယနေ့ အခေါ် နိဗ္ဗာန်လမ်းမပေါ်တည်ရှိသည်။ နှစ် ၁၀၀ ခန့်သက်တမ်းရှိပြီဟုသိရပါသည်။ #HeritageVintageHouseDawei #MyanmarBeEnchanted #WelcomeToDawei samthemandawei.com | Easy Travel Dawei
Posted on August 1, 2019 By SAM THE MAN
← Wow! I got another more year. 2019 Certificate of Excellence on TripAdvisor. #2018 #2019 Thank you all of my beloved clients who wrote reviews on TripAdvisor about their experience with me on day trip. This achievement make me more confidence to continue of tailored day trip concept of authentic local experience, responsible and sustainable tourism in Dawei.